Fatmụaka abụba nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè? - Gba Ígwè
Isi > Gba Ígwè > Abụba abụba ịnyịnya ígwè - ngwọta ga-ekwe omume
Fatmụaka abụba nwere ike ịgba ịnyịnya ígwè?
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmaliteịgba ígwè, buru n'uche na ọtụtụanyịnya igweEzubere makandị mmadụndị na-erughị kilogram 220. Akwụkwọ ikike na ọtụtụanyịnya igwena-enweghị isi ma ọ bụrụ na onye na-agba ya dị arọ. Ọ bụrụ na ị dị ezigbo arọ karịa kilogram 220, chee echiche maka ịnweta aigwe kwụ otu ebeEzubere maka arọndị mmadụ.Mar 14 2017
Mgbe Angie hapụrụ m, adị m n’arọ mgbe ọ dị kilogram 560. Ọ bụ oge kasị ala ná ndụ m. Otu ọnwa mgbe anyị gbasasịrị, ekpebiri m ịgbagharị na mba ahụ dum ka m wee felata.
You kwadebere anaghị m ụgbọala. Anaghị m azụ ụdị egwuregwu ahụ maka na echere m na ọ bụ aghụghọ. Ọzụzụ echiche maka njem njem 3,000 bụ aghụghọ? I kwuru na i mee protein na-eme ka ị maa jijiji n'ụtụtụ, mana mgbe ahụ protein gwụ gị, ị ga-eji butter ahụ na jelii sandwiches na tarts dochie nke ahụ.
Enwere m cola maka nri ụtụtụ. Mgbe ụfọdụ, m nwere tosta achịcha dị iche iche n'etiti m na-agba ịnyịnya. Imebiga ihe ókè bụ isi.
On July 9th you said, 'I had your pupu record,' nku, moz sticks, 'boneless nku na tater skins. 'M riri ya ụbọchị niile otu ụbọchị. Echere m, Achọrọ m ile maapụ.
Nke ahụ pụtara na kilomita ise ga-ewe nkeji iri atọ. Kedu ihe ị na-eme maka ụbọchị ọzọ? Mgbe m hụrụ ntinye na nraranye nke Eric, aghaghị m ịnọ n'akụkụ ya. Eji m okporo osisi were ụgbọala m ruo ihe dị ka izu atọ.
motobecane titanium nyocha
Agakwara m ụlọ ọgwụ ugboro atọ ka mụ na Eric na-agba ịnyịnya ígwè. Been nọrọla na Florida ọnwa atọ. Ọrịa kansa gburu nwanne mama m.
Aghaghị m ịnọnyere ya, nke o doro anya na ị gaghị elekọta nne gị. Si na ịnyịnya gị dị elu pụọ, chere. Ọ dị m nwute na ị na-adọrisị m kpam kpam.
Mba mba mba mba mba. Nwere ike nweta onwe gị ịbụ onye ezi omume na ihu abụọ niile ị chọrọ, mana ka anyị gụọ ụbọchị ị lekọtara ndị a. Eeh.
Ya mere echeghị m na ị na-eji ezi okwukwe na mgbalị ziri ezi iji si n'ụsọ oké osimiri gaa n'ụsọ oké osimiri kwenyere na ọ bụ gị. (Okwu ndị na-ege ntị) Ana m ekwu na ịkwesịrị ịkwaga ma a ga m enwetara gị onye ga - enyere gị aka ịhazi. Aga m enweta gị onye ga-enye gị atụmatụ nri.
Ọ dị mma, ọ bụ azụmahịa. Ọfọn, ekwesịrị m izute Ericin Pasadena, California na Mee 2016. Nke gaara abụ njedebe ikpeazụ ya na njem njem ụgbọ ala ya.
Mana nke ahụ emekataghị n’ihi na Eric emechaghị njem ya. Eric kwuru na ya chọrọ enyemaka ugbu a ọ dị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilogram 700 n’arọ. N'ihi COVID-19 anyị abụghị 'ndị ọbịa na-efe efe ebe a.
Eric na nwunye ya, Angie, nwere njem dị ogologo ma dị mma na RV. Hey dr P Ugbu a, ọ bụrụ na anyị eburu RV nke anyị ga-akwụ ụgwọ ka anyị nwee ike ịbịa California iji hụ gị, iji hụ ihe anyị nwere ike ime iji mee m. Gbaa mbọ hụ na anyị mere ule COVID n’ụzọ. (Upbeat music) Nke a bụ ebe anyị na-enweta ule COVID anyị. (Upbeat music) Anim na azu.
Ọ bụ ezie na Maddie bụ onye na-eso ụzọ, ị bụ onye na-eso ụzọ Maddie? Ma anyị na-agagharị, anyị na-aga n'ụzọ Cali. Nabata na Missouri. Enweghị m ike ịnya ụgbọ ala n'ihi na enweghị m ike ịnọdụ n'oche.
My oxygen larịị bụ n'ezie ala. Aghaghị m ịmalite ile anya na nke a. Malite iji oxygen m.
Ọ na-akụda mmụọ mana anyị na-eri nri abalị. Anyị ga na-akwọ ụgbọala ọzọ echi. (Obi ụtọ music) Anyị mechara mee ya.
Onye 300 pound nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè?
Nwere ikeMgbara ịnyịnya ígwèna300 pound? N'ezie, ị nwere ikegbara ịnyịnya ígwèọbụna mgbe ị nọ300 n'arọ, ma ịkwesịrị ibugharị na aigwe kwụ otu ebenke a na-ewu karịsịa maka arọndị na-agba ịnyịnya. Nwere ike ịrapara na Firmstrong BruiserNwokeOsimiriigwe kwụ otu ebenke ahụ nwere ikike dị narị atọ na iri iseIwu.25bọchị 25 2020
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ịnyịnya igwe buru oke ibu?
iri na otuigwe kwụ otu ebenke ahụ bụburu oke ibu ị nwere ikebelata ogwe ndị ahụ site na ijide n'aka na azuokokoosisi ahụ dị n'ọnọdụ kasị ala na steer tube na-enweghị spacers n'okpuru. Onyeigwe kwụ otu ebeganọkwasidị iche iche karịa nke dabara adabaigwe kwụ otu ebemanaị nwere ikemee ya ihe oji.Jenụwarị 3 2016 Nọvemba
(egwu dị nro) - Enwetara m ọtụtụ ajụjụ site na ndị na-ekiri m dị obere karịa m ma jụọ m ndụmọdụ maka otu esi edozi igwe kwụ otu ebe. N'ezie, enwere ọtụtụ ajụjụ na enweghị m oge iji zaa ha niile na nkwupụta na site na email. Enwere m olileanya na isiokwu a ga-enyere gị aka.
N’agbanyeghi na m debere olile anya na m ga-emecha tolite ma mechaa toro ogologo karịa nwanne m nwanyị nke m tọrọ, echere m na n’ego a, m ga-eche ruo mgbe ebighi ebi. N'ihi ya, ọ dị m mkpa ịbụ onye ogologo 157 centimeters. Maka ndị na-ekiri anyị America, nke ahụ dị mita ise na 1.8.
Na afọ ndị m gbagara ma zụọ, agbaala ịnyịnya ígwè m hụrụ n'anya ma nwee mmetụta dị egwu, yana m ga-agbakwa ịnyịnya ígwè ndị buru oke ibu ma mee ka m nwee ahụ erughị ala na enweghị nchedo. Echere m na m mụtara ọtụtụ ihe na ya ma chọọ ịkọrọ gị nkọwa ndị a. Ana m eji Canyon Ultimate egosipụta ya.
Na ndị kasị nta nha nke a igwe kwụ otu ebe, gụnyere nke m n'ihi na ọ bụ ihe XXXS, nwere obere wiil. Emechaa (egwu dị nro) Ugbu a, echere m na ihe kachasị mkpa maka ndị na-agba ígwè dị mkpirikpi bụ nso.
Ogologo sadulu ahụ adịkarịghị esemokwu. Na naanị n'ihi na ị nwere ike ịbịaru aka ahụ apụtaghị na iru ahụ dị oke, ọ dị mma, n'ihi na ọ bụrụ na ị gbatịpụrụ ma na-eme ka úkwù gị gaa n'ihu iji kpuchie ya, ọ dị mma, nke a ga-ewute gị azụ dị ala, ikekwe ubu mgbu, olu olu, na ịkwa ụda n'elu sadulu nwekwara ike ịkpata nsogbu sadulu. To chọrọ ile anya igwe kwụ otu ebe nwere obere ọkpọkọ dị mkpụmkpụ.
E nwere n'ezie ihe ole na ole dị iche n'etiti n'ezie nha na iru nke kacha nta osisi site niile dị iche iche Nsukka. Yabụ họrọ etiti nwere mkpụkọ pere mpe n'ezie. N'ezie, ime ka mkpirikpi ogologo nke tube dị mkpụmkpụ na-eme ka wiilị ụkwụ na azụ na-abịaru nso, nke ahụ nwekwara ike ime ka mkpịsị ụkwụ mịkọtara ọnụ, nke bụ ezigbo nsogbu nye ndị na-agba ịnyịnya ụkwụ dị mkpirikpi.
Ugbu a, enwere m naanị mkpịsị ụkwụ mkpịsị ụkwụ na igwe kwụ otu ebe a, mana n'oge gara aga, agbaala m ịnyịnya igwe 700C ebe m nwere mkpịsị ụkwụ m site n'otu elekere ruo ise, nke dị njọ. Na ịgafe mkpịsị ụkwụ doro anya bụ obere nsogbu maka njikwa igwe kwụ otu ebe. Ka o sina dị, ọ bụ ihe ngọpụ m ka na-eji maka ịghara ịwụdo ụzọ. - M na-atụ egwu ma ọ bụrụ na i nwere 700C wiil ị nwere ike dị nnọọ nwere na-anagide na a ụfọdụ ego nke mkpịsị ụkwụ yitewere.
E nwere ụzọ ole na ole ndị na-eme ya gbalịrị ibelata mkpịsị ụkwụ ka ha na-eru ọfụma ma dị mkpụmkpụ. Otu n'ime ndị a bụ ime ka oche tube n'akuku steeper. Ihe ngwọta ọzọ ha choro bụ ime ka ndụdụ ahụ dịkwuo elu.
Atụla egwu, enwere mgbanwe ọzọ, ọ bụrụ na ị ga-agbaghara mgbapụta ahụ, ngagharị, n'ihi ya oge eruola ikwu maka obere wiil, ọkachasị 650B na 650C. M ga-ebipụta ya ozugbo. M nnukwu onye ofufe nke nta itule anyịnya igwe.
Achọpụtara m na m nwere njikwa igwe kwụ otu ebe karịa nke nwere obere wiil na igwe ịgba ọsọ m. Enwere m obere mkpịsị ụkwụ na-agafe agafe na ọkachasị enwere m ịnya ụgbọ ịnyịnya ibu na Cr osswinds n'ihi na obere mpaghara nke ihu ihu na-ejide obere ifufe mgbe a na-ele ya n'akụkụ. Enwere m mmasị maka 650C n'ihi na ọfụma, m meriri nnwale oge Geelong, m nọ na P3 na 650C, ana m ejide n'aka na igwe 700C enweghị m ike ịnweta oke ikuku iji merie agbụrụ a.
N'ihi ya, m na-enwe mmasị na wiil ndị a. N'agbanyeghị nke ahụ, emere m ọtụtụ agbụrụ, agbụrụ okporo ụzọ na wiil 700C. Na m nwere 700C ọduọ anyịnya igwe na m bụ n'ezie ala na.
Ọtụtụ ndị mmadụ na-ajụ m gịnị kpatara na ị naghị anya ụgbọ ala 650 oge niile? E nwere nsogbu ole na ole. Nke mbụ, enweghị ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme igwe n'okporo ámá na wiil 700C. Nke abuo, ọ bụrụ n’inweta taya dara ada n’ọsọ ụzọ, o yighị ka ị ga-enweta taya na-anọpụ iche ma ọ bụrụ na ị na-anya 650.
Amaara m n'ihi na m nwara ma ọ gafere nke ọma. Ọ bụ ya mere m ji eji 700C ụkwụ mgbe niile n’ọsọ okporo ụzọ. M ka na-eme ya n’elu ịgba ọsọ m.
Ọ na-eme ka ndụ dịtụ mfe ma ọ bụrụ na m na-agba ọsọ otu agbụrụ ma ọ bụ abụọ ma ọ bụ na-eme egwuregwu. Nke ahụ kwuru, maka ihe omume ebe ị na-edozi onwe gị mgbapu onwe gị, dị ka triathlons, na-abụkarị egwuregwu, ma ọ bụ agbụrụ ebe ị nwere ụgbọ ala raara onwe ya nye n'azụ gị, dị ka ọkwa oge ọkachamara ọkachamara 650 bụ ezigbo ezigbo nhọrọ maka ndị na-agba ịnyịnya, ebe ị ga-eme nwere ike idozi taya ewepụghị onwe gị, yabụ weta akpa nke gị n'ime wdg ma ọ bụ oge ụgbọ ala gị nwere ụkwụ ziri ezi n'azụ ya maka gị Belata nhọrọ nke wiil, taya na tubes dị n'ime mana enwere nhọrọ n'ebe ahụ ma echere m na olile anya Nhọrọ ga - abawanye ka ọtụtụ n’ime anyị pere mpe na - arịọ maka igwe kwụ otu ebe dabara. Ugbu a ọ bụ eziokwu na obere wiil nwere ubé elu Rolling eguzogide, ma sayensị na-egosi na nke a karịrị karịa mebere maka obere ịdọrọ na obere ibu ebe ọ bụ na wiil ndị ahụ pere mpe.
Ọ dị ka ịkwọ ụgbọala n'okporo ụzọ, ebe oke ihe mgbochi bụ ihe dị mkpa maka ogo nke wiil ahụ, ụzọ n'okporo ụzọ na-adịkarị obere. (Egwú dị nro) Nye ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, nkasi obi ugbu a na-abịa n'ihu aerodynamics, nke ahụ zikwara ezi. Ma ọ bụrụ na ị bụ otu n’ime ndị chọrọ ịga ọsọ ọsọ, ma ọ bụrụ na ihu ihu igwe kwụ otu ebe gị dịkwa oke? elu, ị gaghị enwe ike ịda ala maka ikpuru ikuku na nchekwa.
Na nke a bụ nsogbu kachasịrị ndị na-agba ịnyịnya ụkwụ dị mkpụmkpụ, ebe ọ bụ na sadulu gị adịchaghị oke, yabụ njikwa gị ga-adị obere, na igwe kwụ otu narị na isii na iri isii ị nwere ike iwetu ala n'ihu n'ihi na igwe kwụ otu ebe n'onwe ya dị nso na ala, ebe wiilị ahụ. Site na ogwe 700C, ịchọrọ ịhụ ogo nke ọkpọ isi n'ihi na ọ buru oke ibu, enweghị ọtụtụ ihe ị ga-eme maka ya. Eeh, enwere sloping stems, mana ha na-eburu gị gaa n'ihu.
Ma enwere okpukpu abuo abuo, ma ha bu ezigbo ihe ojoo ma jọrọ njọ ahihia nke nwere obere isi okpukpu, ma oburu na odi ala, i ghaghi igbakwunye spacers n'okpuru osisi, ma oburu na o kariri, igaghi enwe ike otutu. (Egwú dị nro) Ogologo oge a nwere ike ịdị ka obere nkọwa ugbu a, mana ọ bụ nlezianya dị oke mkpa maka ndị na-agba ígwè dị mkpirikpi, yabụ chee na ọ bụrụ na ị nwere ụkwụ dị mkpụmkpụ ị ga-enwe obere ohere nnwere onwe ịgagharị karịa onye nwere ogologo ụkwụ. Otú ọ dị, ogologo crank pụtara na gị pedal ga-atụgharị a ibu gburugburu.
Yabụ na ala nke ụkwụ ụkwụ gị, ụkwụ gị dị obere, ị ga - edobekwa ihe ịnọ ọdụ gị iji mezuo mkpịsị ụkwụ ụkwụ nwere ogologo crank, ụkwụ gị ga - abịa karịa nke nwere obere mpempe akwụkwọ, nke na - ewetara ikpere gị elu, mgbe ahụ pounding ị na-etinye ikpere gị na afo, na m ikpe a bụ nsogbu karịsịa mgbe ị na-ala ala na-agbalị ịbụ aerodynamic, ma ọ bụ na oge ikpe. Nke a bụ ihe kpatara obere cranks ji dị mfe karịa maka obere ndị ịgba ịnyịnya ígwè na pedal. Ya mere maka ọtụtụ ndị na-agba obere ịnyịnya, ọ bara uru ịtụle ihe nkenke dị mkpụmkpụ, ma maka nkasi obi na izere ihe ize ndụ nke mmerụ ahụ na ikpere gị na hips, yana nsogbu nwere ike ịnyịnya site n'akụkụ na-n'akụkụ na-ama jijiji.
Onwe m, ahụrụ m nnukwu mmụba na njikwa na nsonaazụ m mgbe m gbanwere site na 170mm crank gaa na 165mm crank dị ka nke a. 165s na-adịkarị n'ozuzu ụbọchị ndị a na 155mm cranks, yabụ ka anyị gaa. Ugbu a, ụfọdụ ndị nwere ike ịgwa gị na ị ga - enweta obere crank, ị ga - enwe obere ike ma yabụ nwee ike, ana m atụ ụjọ na nke ahụ bụ naanị ihe mkpofu n'ihi ee, ị nwere obere ike, mana ị nwere ọkwa dị elu maka otu ụkwụ ọsọ gị bụ ọrụ nke ọnụọgụ na nrụgide, yabụ ọ bụrụ na ọ nwere ike iwe obere oge iji dozie nhazi gị na ịpịgharị na nke ahụ dị elu, ozugbo ị họọrọ nchikota ahụ, ihe nkenke dị mkpirikpi ekwesịghị imebi arụmọrụ gị.
Agbanyeghị, ịkwesịrị ịkpachara anya na ị nọ n'ọnọdụ dị ala iji kwado ogo gị dị elu ọbụlagogo ugwu kachasị elu ị ga-arịgo. (Egwú dị nro) Ugbu a, otu ihe dịpụrụ adịpụ maka ndị na-agba ịnyịnya na-adị mkpụmkpụ karịa, nke ahụ bụ obere n'ihi na ọ nwere ike ịbụ nzuzu mara mma maka onye nwere ubu warara warara ịnya ụgbọ elu sara mbara. M ziri ezi, onye nkiri? Mm hmm.
Ugbu a n'onwe m, achọpụtara m na ogwe aka ọ bụla sara mbara karịa 38 centimeters na-enwe mmetụta na-adighi mma ma ghara iru ala, ana m ahọrọ ndị na-ejide m ihe dịka 36 centimeters n'obosara na mkpuchi. Nke ahụ na-adị ọtụtụ mma. Mana njikwa aka nke sara mbara abụghị njedebe nke ụwa, ọ na-agbanwe naanị omume ịkwọ ụgbọala ntakịrị.
Mụbaa ọtụtụ ọdụ gị nke ukwuu, ọbụlagodi na ọ bụ naanị ntakịrị. Otu nsogbu, Otú ọ dị, bụ mgbe curvature, okirikiri nke dobe usoro, buru oke ibu. Ugbu a, ọ bụrụ na ị bụghị oke ogologo, enwere ike ịnwe obere aka, m na-emekwa.
Otu n'ime ihe ndị na-eme ka m ghara iru ala na igwe kwụ otu ebe na-ezighi ezi bụ erughị eru nke ndị na-agbaji breeki Ọ bụghị naanị na ọ na-adịghị mma maka aka gị iji rụọ ọrụ na mgbatị oge niile, ọ dịkwa egwu n'ihi na ịnweghị ike iru breeki levers ngwa ngwa mgbe ị chọrọ ha. Ma ọ bụ nke ka njọ, ịnwere ike iji aka gị na-anya ụgbọ ala mgbe niile, ọ bụrụ na ọ bụrụ, mgbe ahụ ị nwere ike ijide ha ma ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị, nke nwere ike ibute ọdịda. Ya mere, ọ dị ezigbo mkpa ịnweta njide nke na-enye gị ohere idozi iru ndị levers ahụ.
Ma ị nwere ike ịchọpụta mgbe ị na-azụ ihe njikwa aka. Nkọwa ọzọ nke njikwa aka nke dị oke mkpa maka ndị dị mkpụmkpụ bụ nkuku ị setịpụrụ aka na ọnọdụ nke mkpuchi na njikwa ahụ, na enwere ihe kpatara m ji hapụ eriri a na teepu anwụ maka oge ahụ. Achọrọ m igosi gị otu oke ọdịiche ọ nwere ike ịme ebe ị na-etinye hoods na poolu na akụkụ nke ị nwere poolu ahụ.
N'ihi ya, m tọgọrọ ndị azuokokoosisi bolts. Lelee. (adụ egwu) (ịkụ egwu nke akụrụngwa) Ma ị ga - ahụ na ịgbanwee akụkụ ebe a na - agbanwe ebe dị anya site na sadulu na okpu ahụ nke ukwuu, enwere m njide aka.
Yabụ ọ bụrụ na ibughachiri ya azụ, ọ na-eme ka ọ dị nso na mfe iru. N'otu aka ahụ, ọ bụrụ na ị gbanwee ọnọdụ nke mkpuchi na mmanya (egwu dị nro), ịnwere ike ịmegharị ihe mkpuchi ahụ nso na sadulu ahụ, wee si otú ahụ belata. Ọnọdụ nke mkpuchi na aka na-eme ka centimita anọ nke elu dị iche.
Otú ọ dị, ihe dị mkpa bụ na ịgbanwe ọnọdụ nke mkpuchi ahụ na aka ahụ na-emetụta ọ bụghị naanị site na sadulu na mkpuchi, kamakwa ebe dị anya site na breeki aka na aka ahụ, nke bụ ihe ọzọ anyị kwurula banyere obere aka. Yabụ ị ga-ahụ nguzozi. M ga-asị ịtọlite ​​iru iru na nkuku na handlebars na nri akuku gị, mgbe ahụ, na-echegbu onwe banyere breeki lever iru. (Egwú dị nro) Ugbu a, echere m na ọ dị mkpa ịkọwa etu o siri dị arọ ka ịgbanwee na ndị na-agbanwe ihe na-arụ ọrụ mgbe ndị na-egwu gị dị anya ma ị nwere obere aka, n'ihi na ị ga-eweta ike ahụ n'akụkụ ahụ, mgbatị ahụ zuru ezu, Enwere m mmasị karịa ndị na-agbanwe eletrọniki, n'agbanyeghị na amaara m na ha anaghị adị ngwa ngwa.
Ma maka m enwere m ahụ iru ala karịa ya, n'ihi na ọ na-ewe mkpịsị aka aka ngwa ngwa, ma ugbu a ọfụma m, obere aka na-adịghị ike anaghị ahụta karịa ike gwụrụ ma enwere m ike ịgbanwe ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọbụna ma a bịa n’obere aka, ọ dịkwa oke Nhazi nke mkpuchi igwe dị ezigbo mkpa, dịka ọmụmaatụ enwere ụfọdụ njikwa aka ebe igwe mkpuchi dị obosara, enweghị m ike ị nweta aka m n'akụkụ ha niile. Ma nke ahụ amachaghị mma n'ihi na ọ pụtara na aka gị enweghị nchekwa ma ị nwere ike iwepụ okporo ụzọ.
Adara m ụzọ abụọ ugboro abụọ na ọzụzụ ma ọ dịchaghị mma. N'ihi ya, m na-ahọrọ mgbe niile usoro mma nke dị mma nke na-adabere na setịpụrụ aka. (Egwú dị nro) Ugbu a, m ga-achọ iji nkọwa ole na ole dị ezigbo mkpa maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè pere mpe mechie.
Nke mbụ, ohere maka ndị na-ejide karama. Mgbe inwere obere okirikiri ahụ, triangle ahụ pere mpe ma ị nwere obere oghere iji tinye karama na ngwọ karama. I nwedịrị ike nwee nsogbu ịbata karama na ịpụ.
Ama m na ọ mara m mma. Ngwongwo karama abụọ nwere ike ime ka ọnụọgụ ahụ dịkwuo elu, nke nwere ike ime ka ijikwa n'ihu ghara iru ala. Ọ bụ naanị ihe ị ga - eme iji nweta usoro kwesịrị ekwesị.
N’ikpeazụ oghere dị n’elu wheel. Yabụ ọ bụrụ n'ịgba ịnyịnya ígwè 700C agaghị enwe ohere dị ukwuu n'etiti ogologo sadulu na ụkwụ azụ mgbe ị dị obere. Nke ahụ pụtara na ọ bụrụ na ị nwere otu n'ime nnukwu ọdụdụ ndị ahụ, ọ ga-abụ na ọ ga-ehichapụ ya n'azụ ụkwụ.
Agbalịrị m nke ahụ. Ọ bụ sub-ezigbo maka ma gị ọsọ na ike n'ezi ihe nke gị saddlebag. N'ikpeazụ, n'ihi obere ihe ndozi ya na wiil nke azụ, ọ bụrụ na ị tinye ọkụ azụ na oche oche maka ụbọchị ndị gbara ọchịchịrị, ị nwere ike ịchọpụta na ọkụ azụ ahụ dị n'okpuru elu nke ụkwụ azụ. ndị ọkwọ ụgbọ ala na-ahụ anya.
Ya mere ịchọrọ ịcheta itinye ọkụ gị elu ka ha wee nọdụ n'elu sadulu ma ọ bụ na onwe ha. Ọ dị mma, enwere m olileanya na edemede a na-enyere gị aka bụ ndị rịọrọ ndụmọdụ m banyere nnukwu isiokwu a. Ọ bụ nnukwu isiokwu maka ndị anyị na-enweghị nnukwu.
Ọ bụrụ na ọ masịrị gị, nye anyị mkpịsị aka aka, nweere onwe gị ịkekọrịta ya na obere ndị enyi gị ma ọ bụ nnukwu ndị enyi gị ndị na-enweghị ekele maka etu o si sie ike ịdị obere. Ma ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko hapụ ha na nkọwa ndị dị n'okpuru. Aga m eme ike m niile ịchọta onye ọkachamara wee zaa gị ya.
Ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịhụ edemede a maka ihe kpatara ike ibu ibu ji adịchaghị mkpa dị ka onye ọ bụla ọzọ na-eche. Ndo.
Kedu ibu ibu nke ịnyịnya ígwè 26 nke anụ ọhịa ga-ejide?
Maka 24 ma ọ bụ26-inchigwe, ikike kachasị bụ 250 pound. Nke a na-agụnye cruisers, niile-teren, BMX-ịke naugwu igwe kwụ otu ebe.Dec. 5 2018
A na-emezi Scott Genius ka ọ bụrụ igwe kwụ otu ebe. Ma nke a bụ mbipụta kachasị ọhụrụ, ọ gbanwere usoro zuru ezu, mana otu n'ime ihe ndị kachasị mma banyere igwe kwụ otu ebe a bụ na ị nwere ike gbanwee ụzọ abụọ dị iche iche dị nro, yabụ n'isiokwu a, m ga-anwale 27.5 wiilị, gbanwere ha maka 29 ma mee ka ị mata mmetụta ọ na-enwe n'okporo ụzọ ahụ, otu o si agbanwe n'ezie ụzọ igwe kwụ otu ebe, otu o si emegide elekere ma mechaa gbalịa ikpebi nke m họọrọ kama ịhapụ ya -enye gị a obere ghọta otú nke a si emetụta Njirimara a igwe kwụ otu ebe.
Mana nke mbu ka anyi laghachi na nzuko omumu ihe maka ihe di nkpa - Nke oma, ka anyi bido na ihe omuma banyere ogbako a banyere wiil ndi a, Ogho 27.5 nwere okpukpu abuo na isii, nke 29er nwere uzo abuo. anyị na ibu ibu, yabụ 27.5 dị na 1.87kg na 29er na-ebute inat 2.12, ya mere 25 g dị iche.
Cheta, nke a bụ naanị maka itule igwe kwụ otu ebe ma ọ bụrụ na ị nwere ụzọ 29 '' wiil ndị bụ n'ezie 50g arọ. Echefula na nke a bụ n'ezie ịtụgharị uka, ya mere ọ na-eme ihe dị iche karịa naanị ọnụọgụ igwe kwụ otu ebe. Ya mere, m ga-atụ anya na m ga-eje ije na-eche nke a n'okporo ụzọ, m ga-atụ anya na 29er ga-akọ ihe n'ezie site na ihe siri ike ntakịrị ma buru ọsọ ya ntakịrị karịa, mana ọ ga-esikwu ike ma nwayọ nwayọ mgbe ị na - eme ngwa na braking - inch isii taya na obere wiil dị n'ezie karịa na nkezi gị taya igwe kwụ otu ebe na dabara ndị 'gbakwunyere' nha, ma ha dịkwa omimi na nke ahụ ga-eme nnukwu ọdịiche na etu igwe kwụ otu ebe siri dị.
Ọ bụ ihe dị ka milimita iri dị omimi, yabụ ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka dum dayameta nke wiil ahụ enwere ọdịiche 20mm, na 29er ọ bụ 20mm ka ibu. Nke ahụ pụtara na mgbe ị na-agbagharị n'elu ntụ, a na-agbada nkuku mbuso agha na wiilị buru ibu, yabụ na ọ ga-agbagharị ntakịrị ọsọ ọsọ na ihe ndị ahụ. Ka anyị kwuo maka nrụgide taya ahụ, na mgbakwunye taya ndị ị ga-agba ọsọ na-agba ọsọ, achọpụtara m na n'ihi nnukwu mgbakwunye na taya a, ị dị ntakịrị psi, ị nwere ike ịnwe obere nrụgide na wheel ukwu.
Ya mere, site na ọnụ ọgụgụ ndị ahụ, echere m n'okporo ụzọ m ga-atụ anya na 29er ga-adịwanye arọ, dị nro na-emetụ aka, ma sie ike ịmalite na ịkwụsị. Na 27.5, m ga-atụ anya ijide ntakịrị, n'ihi oke taya ahụ, m ga-atụ anya na igwe kwụ otu ebe ga-adịtụ ntakịrị ma nwee ike ịgbanwe ụzọ obere mfe ma kwụsị ngwa ngwa.
Kedu ka wiil ndị ahụ si emetụta jikọtara nke igwe kwụ otu ebe? Ka anyị buru ụzọ leba anya na ntụgharị ihu, ọ dị ntakịrị mma na 29er, 65 dgerees vs 65.6, yabụ na ọ bụghị nnukwu ego. Ihe nkwado n'okpuru ga-agbanwe ntakịrị na 29er ọ dị milimita isii dị elu ka ọ ghara ịga n'akụkụ, mana ị ga-enwekwu ohere ị gafere ụkwụ.
Nnukwu ihe ebe a maka m echere m na ọ ga-abụ mmebi BB. Yabụ na ị nwere asaa asaa 7.5 mm karịa na 29er ka ọ wee dị gị ka ọ dị.
Na 29er ha dị obere miri emi karị na igwe kwụ otu ebe. Nke ahụ na - enyere aka ịkwụsị bump, ị ga - enweta igwe kwụ otu ebe karịa. Na na na, ezuru nke ogbako ogbako, mee ka fun.
Ya mere, enwere m ike ịgba ịnyịnya ígwè a na wiil 27.5 maka ọnwa abụọ ma ọ bụ atọ ugbu a. Ọ na-adị oke mma, ọ dị ka ị ga-enwe ike ịnwe ọgba tum tum a, na-eme ihe ike na mgbada, ọ naghị adị ka ezigbo 'mgbakwunye' igwe kwụ otu ebe.
Taya 'gbakwunyere' nwere ike ịchọta ọghọm dị na apịtị ebe ha na-egwu mmiri, ha anaghị egwu onwe ha. Nke ahụ abụghị etu ọ na-adị na igwe kwụ otu ebe a. Taya ndị ahụ dị sentimita 2.6 ma ha na-azọ ụkwụ na ụkwụ, ha na-ehicha apịtị, ọ na-egwu ala, ọ na-adị ka obere igwe kwụ otu ebe.
Ya mere, ọ bụ oge ịnwale wiilị 29er, ma anwalebeghị m ha n'ụgbọ ịnyịnya a, yabụ enwere m obi ụtọ itinye ha, lee ka ọ dị. M n'ezie nọkwasịrị n'elu a ọtụtụ enduro na 29er wiil otú ahụ ka m na-eche nke a igwe kwụ otu ebe nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma - 150mm nke njem, oké maka UK enduros, abụghị nnọọ EWS, i nwere ike chọrọ a obere ihe njem n'ihi na, ma n'ihi na m na-agba ịnyịnya style Echere m na nke a nwere ike ịbụ rọketi na wiil 29er mana m na-atụ anya ịnwale ha site na wiil 29er na taya, ha abụọ bụ ndị na-enweghị ụzọ, n'ihi ya ọ bụ n'ezie ọ dị mfe ịpụpụ kaseti na diski. Yabụ, n'eziokwu, ịnwere ike ịnwe ụkwụ abụọ maka otu igwe kwụ otu ebe ma gbanwere ha mgbe ọ masịrị ha, ọ bụ oge maka ndị rotors.
Otu ihe ikpeazụ ị ga - eme bụ ịgbanye mgbawa. Agbanyela mgbawa ahụ, wiil ndị ahụ dị na ọ naghị ele ha anya. taya ndị ahụ dị warara, alaghachila m 2.4 ugbu a ka anyị gba ha, nri, ejiri m oge ụfọdụ na nnukwu wiil ugbu a ọ na-adị m mma, ọ dị m ka ọ na - agba ọsọ oge niile ọ na - adị m ka ọ dị afọ 29ers emere m mgbe m gbara ịnyịnya na Enduro.
Ya mere, n'elu ihe dị n'elu ebe ọ mara mma ma ọ bụ ntakịrị mkparịta ụka, ọ dị ka m na-efe efe. Ọ dị ka sekọnd ọsọ ọsọ karịa obere wiil, mana ka ọ na-enwetụkwu ọrụ aka ọ dị ka ị ga-akpachara anya karị. Yabụ, ee, ha na-eme nnukwu ụgbọ ala banyere ihe, ọ bụghị ịdaba n'olulu na-abụkarị, mana mgbe m kụrụ ihe buru ibu ma m gbalịrị iji ahụ m toụọ ihe, achọpụtara m na m na-arapara ụdọ m n'azụ taya ma eme ya na-agba ọsọ a.
Ya mere, m 5'10 ', mara mma nkezi elu, nke bụ a bit toro ogologo karịa Martyn na Blake ị ga-ekwere, ma m na-ahụ na na 29' wiil na mgbe ụfọdụ m na-arapara m ụfụfụ n'azụ taya mgbe m na-eme ya n'ezie gbalia ka m jiri ukwu m nuo ihe. Echere m na ọ bụrụ naanị m gafere 29er, m ga-eji ya, mana ịgbanwee n'etiti ha ọ bụụrụ m obere nsogbu. n'ihi na n'ezie chere nnọọ ngwa ngwa.
Ya mere ezu nke mmetụta, ka anyị kwuo banyere nsonaazụ na oge. Kedu onye mmeri? Yabụ, ọ bụ 29er, mana ọ nweghị ihe dị na ya. Emere m 1:42 na 29er, 1:43 na 27.5, ya mere ọ were naanị nke abụọ.
Ma akụkụ na-adọrọ mmasị maka m na-abịa mgbe ị na-ele anya. Akụkụ dị elu nke mgbatị a bụ ngwa ngwa, na-asọ, ihe na-adị n'ezie, na-agba ọsọ ọsọ na 29er, mana m nọ na sekọnd atọ nwayọ nwayọ n'ebe ahụ, yabụ na-adịghị mkpa, mana na mpaghara ahụ siri ike ọ dị sekọnd anọ ọsọ ọsọ. Echere m na anyị nwere ike ikwu na ọ bụ n'ihi na ị gafere ebe m kụrụ ihe ndị a niile ma nwee nnukwu nnukwu nkwụsị.
29er anaghị abanye dị ukwuu, n'ihi ya, ọ na-agwụ ike ịnya ịnyịnya, kamakwa ngwa ngwa karịa bumps ndị ahụ. Yabụ n'ezie maka m nke a bụ nnwale na-adọrọ mmasị. Ma dị ka onye na-agba ọsọ, m ga-agba ịnyịnya ọsọ ọsọ.
Anọla m na igwe kwụ otu ebe ọtụtụ na 27.5s yabụ echere m na ọ bụ oge ịhapụ 29ers ebe ahụ. Echere m na nnukwu ọdịda na 29ers bụ ọgba tum tum na-akwụsị.
M na-eche mgbe niile na mgbe m gbalịrị ịnya ịnyịnya ígwè ahụ, ọ bụghị ọtụtụ n'ime ya na ule a ka m wee nwee ike iburu nke ahụ n'uche n'ọdịnihu, mana ugbu a, m na-arapara n'ahụ ndị 29ers. Ọ bụ otu n'ime ihe ndị mara mma m hụrụ maka ụfọdụ igwe kwụ otu ebe ndị a na ọ dị mfe ịgbanye wiil ndị ahụ, ị ​​nwere ike ịnwe ụkwụ abụọ abụọ maka igwe kwụ otu ebe gị, nke dị obere na nke buru ibu, ha dabarakwa iche ọnọdụ gbanwere, ma ọ bụ ịnwere ike ịchọpụta na ị na-ahọrọ nke ọzọ na nke ọzọ ma na-ere naanị igwe kwụ otu ebe ndị ọzọ - igwe kwụ otu ebe bụ n'ezie vasatail. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara edemede a, hapụ ha n'okpuru n'ihi na m ga-eme isiokwu na-aga n'ihu na GMBN Tech Channels ka m nwee ike banye eziokwu ahụ.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịhụ otu esi arụ taya, pịa maka uplọ Ọrụ Na-ahụ Maka inlọ Ọrụ Na Na Na na ala ebe ahụ maka Scott Genius First Gbaa ịnyịnya. Nye anyị mkpịsị aka aka ma ọ bụrụ na ịchọrọ isiokwu a ma echefula ịdenye aha ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Ngwongwo taya ndị abụba dị mma maka ndị na-agba ịnyịnya ibu?
Nke a bụ naanị obere ndepụta nkekacha mma anyịnya igwemakandị na-agba ịnyịnya ibu karị. Mgbe anyị kpuchiri ọtụtụigwe kwụ otu ebeụdị, a nwalere ma tụkwasị obiigwe kwụ otu ebe buru ibudị ka Mongoose Dolomite ma ọ bụ Framed Minnesota nwere ike ijikwanke ka eluigwe mfe.05.17.2020
Ọ nwere ike ịnya ịnyịnya ígwè ndị na-abụ abụba?
Abụba anyịnya igwebụ ihe ịtụnanyamfe nọkwasịna ndị ahịa anyị enweghị ike ikwenye karịa. Mgbe mmadụ nwesịrị ulena-agba ịnyịnyaa Drftless maka oge mbụ, ha na-ekwukarị, O juru m anya otúmfeyana-agba ịnyịnya. Nke buru ibutayanyekwu nguzo na ichikota, nke n’enye onye n’abia obi ike ichota ihe omuma.11/22/2016
Obere mmadu o nwere ike inya nnukwu igwe?
Ee aekpri owo ekemejikwaa annukwu igwe kwụ otu ebe. Ọ bụrụhaala na ịnwere ikejigideigwe kwụ otu ebeelu nkasi obi, ginwere ike ịnyaya.
Ngwongwo gravel buru oke ibu?
Nasizing nagravelanyịnya igwe adịghị iche na igwe kwụ otu ebe. Y’oburu n’inwe uzo 54 cmigwe kwụ otu ebeị chọrọ ịraparaiheotu etiti ya nanke giọhụrụgravel igwe kwụ otu ebe. Nke a pụtara na ọ bụghị oké egwu ma ọ bụrụiheeku bụ ma ọ bụ a tadỌzọkwaobere ma obuburu oke ibu- ị ga-adị mma.Sep 3 2019
Ibu arọ gị ọ dị mkpa mgbe ịzụrụ igwe kwụ otu ebe?
A na-elekarị ha anyaiheebe kacha mmaigwe kwụ otu ebeịwụfu gram n'ihi na wiil na taya na-agbagharịibu ibu. Mgbakwunyeibu ibuenwekwu inertia na wheel inertia okwu a otutu ịgba ígwè n'ihi naiheonye na-agba ga-emerịrị ya iji mee ngwangwa. Igwe dị arọ na-achọkwu ume iji merie ike a.Jul 29. Dec 2019
O nwere oke ịgba ịgba ịnyịnya ígwè?
Ee,igwea nwerenjedebe okenke 275-300 lbs. Ndị ụlọ ọrụ dị ka ZizeBikesọkachamara na ịmepụta iheanyịnya igwemaka arọndị na-agba ịnyịnyaSomefọdụ Zizeanyịnya igwenwee anjedebe okenke 550 n'arọ. Ọtụtụịgba igwe kwụ otu ebeenwere ike ịchọta ya na ntuziaka ndị nwe ya ma ọ bụ nkọwa ntanetị.Ọnwa Ise 11, 2020